राज्यको हेराई नै गलत हुँदा ६ न. प्रदेश गरिव वन्न पुगेकाे हाे, अब सम्वृद्व बन्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more राज्यको हेराई नै गलत हुँदा ६ न. प्रदेश गरिव वन्न पुगेकाे हाे, अब सम्वृद्व बन्छ
फागुन ११ गते, २०७४ - ०९:०९
पछाडी पारिएका वर्गको उन्नती र प्रगतीका लागि जेल ,नेल खानु पर्यो । आफ्ना काखमा रहेको नावालक सन्तालाई मायाको मुटुवाट अलग गराई देश र मुलकको मुक्तिको खातिर वन्दुक र वारुद्धसंग साईनो गाँस्दै मृत्यू संग नडराई निरन्तर आफ्नो कर्ममा जुट्यो उहि व्यक्तिसंग विकास, संवृद्धीसंग जोडिएका योजनाका विषयमा साँसद सत्य पहाडीसंग गरिएकाे कुराकानी ।
जीवनको प्रवाह नगरि जनमुक्तीको लागि हामी लडेका थियाैं। त्यसको फलस्वारुप हामीले परिवर्तन पाएका छौँ । संविधानमा मौलिक हक लेखिसकेपछि अव कार्यान्वनको दिशा तीर हामी गएका छौँ । ठाउँ ठाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नतीको काम सुरु भएको छ । नयाँ ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था थप्ने काम पनि सुरु भएको छ । अब जनताले सहजरूपमा सेवा पाँउने छन् ।
फागुन ११ गते, २०७४ - ०९:०९ मा प्रकाशित